"Indlu endala" - I-Airbnb
Yonwabela indawo yokuhlala epholileyo endlwini ukusukela ekuqaleni kwenkulungwane! Ilungiswe ngokupheleleyo ngesitayile sevintage kunye neendawo ezivulekileyo zokuhlala kunye. Nokuba kukuhlala ixesha elifutshane okanye ixesha elide, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla, ukuphumla kwaye uchithe ixesha elihle nosapho.
Yazi i-architecture yayo ukususela ekuqaleni kwe-1900s, kunye neepaseji zangaphandle, iindonga ze-adobe, imigangatho yeplanga kunye nophahla lwezinki, ezibhaliswe ne-INAH njengeNdlu yeNdala eyinyani.
Ngenxa yolwakhiwo lwale ndawo, akukho ndawo yokupaka, iindwendwe zethu zipaka kwi-avenue ephambi kweCasa Antigua, kude kube ngoku ingekabonakalisi mngcipheko wezithuthi zabo, zikwajongwe ngevidiyo ngama-24/7. Izitrato zibonelela ngendawo yokuhamba ngokuzolileyo kwaye uphumle kule dolophu intle yamakholoniyali. Yindawo ekhuselekileyo nenobubele.
Qhagamshelana nam ngeWhatsApp ukuze uqiniseke ukuba ukuhlala kwakho kungamava apheleleyo.
Sikulungiselele i-triptych enengcebiso malunga nento omawuyindwendwele, wenze kunye nalapho ungatya khona ePueblo Mágico El Oro 7121867641. Yigoduse njengesikhumbuzo sohambo lwakho.
Sikulungiselele i-triptych enengcebiso malunga nento omawuyindwendwele, wenze kunye n…